Dominoes 🥇 Tinye ma nwee obi ụtọ site na emulator.online
Dominoes. Egwuregwu dominoes dị oke mma ama ama n’uwa niile ma mee otutu mmadu. Na nnọkọ ezinụlọ, okirikiri nke ndị enyi, nnọkọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, anụ oriri, na ngwụsị izu, wdg.
O nwere ike ịbụ otu n’ime egwuregwu ndị kacha ochie enwere ederede.
Dominoes: otu esi egwu egwu site na step😀
Gịnị bụ dominoes?
Domino bụ a game egwuregwu na-eji iberibe akụkụ anọ, n'ozuzu ha nyere ọkpụrụkpụ nke na-enye ha ọdịdị nke ihe yiri ya, nke otu n'ime ihu na-akara site na ntụpọ na-egosi ụkpụrụ ọnụọgụ.
A na-ejikwa ya n'otu n'otu akọwapụta iberibe ndị mejupụtara egwuregwu a. Aha ahụ nwere ike si na Latin okwu "free domino" ("Daalụ Chukwu"), nke ndị ụkọchukwu ndị Europe kwuru maka akara mmeri n'ọgụ.
Ọnụọgụ nke ndị egwuregwu: 4
Iberibe: Mpekere 28 nwere akụkụ sitere na 0 ruo 6.
Iberibe ọ bụla so particip: 7 iberibe maka onye ọ bụla so na ya.
Ebumnuche nke egwuregwu: Mee 50 isi.
Ibe Domino: ọ bụ mpempe akwụkwọ mejupụtara abụọ, nke ọ bụla nwere nọmba (ịmaatụ nke iberibe: 2-5, 6-6, 0-1).
Esi edebe iberibe ahụ?: mgbe a na-etinye ibe n'akụkụ onye ọzọ nwere opekata mpe otu ọnụ (ihe atụ: 2-5 ọkụ 5-6).
Na-agafe uzo: mgbe onye ọkpụkpọ enweghị mpempe dabara ma ọ bụ njedebe.
Egwuregwu egbochiri: mgbe ọ nweghị onye ọkpụkpọ nwere mpempe dabara na njedebe ọ bụla.
Winsnye meriri n’egwuregwu ahụ?: mgbe otu n'ime ndị egwuregwu na-agba ọsọ iji gbapụ iberibe n'aka ya, ebe ọ dabara ha niile.
Etu esi egwu Dominoes?🁰
Iberibe "mebiri" na tebụl, onye ọkpụkpọ ọ bụla na-ewere Iberibe 7 na-egwu. Onye ọkpụkpọ na-amalite egwuregwu bụ onye nwere mpempe 6-6🂓. Bido egwuregwu ahụ site na itinye ibe a na etiti okpokoro. Site n'ebe ahụ, kpọọ counter-klookwaisi.
Onye ọkpụkpọ ọ bụla ga-anwa itinye ụfọdụ iberibe ha na iberibe egwuregwu ahụ, otu otu oge. Mgbe onye ọkpụkpọ jisiri ike dabara otu, a na-enyefe onye ọkpụkpọ ọzọ. Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ enweghị mpempe dabara n'akụkụ ọ bụla, ntụgharị ga-agabiga, na-egwu egwu ọ bụla.
El egwuregwu nwere ike ịkwụsị n'ọnọdụ abụọ: mgbe onye ọkpụkpọ egwu jisiri ike tie egwuregwu ahụ, ma ọ bụ mgbe akpọchiri egwuregwu ahụ. Onye ọkpụkpọ mbụ nke oge a ga-abụ onye ọkpụkpọ aka nri nke onye ọkpụkpọ mbụ si egwuregwu gara aga.
Ọ bụrụ na ọkpụkpọ ọ bụla emeriwo egwuregwu ahụ: ndị otu gị na-ewere isi ihe niile site na iberibe ndị dị n'aka ndị mmegide.
Ọ bụrụ na akpọchiri egwuregwu: a na-agụta ihe niile e nwetara site na ụzọ ọ bụla.
Umu abuo nwere obere ihe bu onye mmeri, ma were ihe nile nke uzo ozo. Ọ bụrụ na enwere eriri na ọnụ ọgụgụ a, ụzọ ahụ egbochiri egwuregwu ahụ furu efu ma ụzọ mmeri ga-ewe isi ihe niile site na ụzọ a. A na-achịkọta isi ihe ndị na-emeri emeri ma egwuregwu ahụ gwụ mgbe otu n'ime ụzọ abụọ rutere akara akara 50.
Isi uru nke mpempe akwụkwọ ọ bụla kwekọrọ na nchikota nke ụkpụrụ nke isi abụọ nke mpempe ahụ. Ya mere, mpempe 0-0 bara uru ihe 0, mpempe 3-4 bara uru 7, ibe 6-6 kwesịrị akara 12, wdg.
Egwuregwu ahụ nwere mmadụ anọ so na ya, ndị na-etolite ụzọ abụọ, ha ga-anọdụkwa n'ọnọdụ ndị ọzọ.
nkwenye a nabatara nke ọma bụ na ọ gaara apụta na China n’etiti 243 ruo 181 BC , nke onye agha aha ya bu Hung Ming kere.
N'oge ahụ, iberibe ahụ yitere nnọọ ka kaadị ọkpụkpọ, ihe ọzọ mepụtara mba ahụ, a kpọkwara ha "dotted akwụkwọ ozi" .
N'ebe ọdịda anyanwụ, enweghị ndekọ banyere dominoes ruo etiti narị afọ XNUMX, mgbe ọ pụtara na Frans na .tali, kpomkwem n'ụlọ ikpe nke Venice na Naples, ebe eji eji egwuru egwu dika ihe mmasi.
Nkwụsị na-esote yiri ka ọ bụ England, nke webatara Ndị mkpọrọ France na ngwụsị narị afọ XNUMX.
Site mgbe ahụ gawa, ọ dabere n'echiche anyị na ihe ọmụma bụ isi nke akụkọ ntolite, mana anyị nwere ike ịkele ndị kwabatara, nabata ma ọ bụ na ọ bụghị, ndị wetara egwuregwu ahụ na ala Spanish.
Ihe egwuregwu na ịchọ mma
Obere, ewepụghị na akụkụ anọ ngọngọ, Enwere ike iji ihe dị iche iche mee Domino, dị ka osisi, ọkpụkpụ, okwute, ma ọ bụ plastik.
Versionsdị nsụgharị ndị ọzọ dị oke ọnụ, nke ndị ọrụ egwuregwu na ndị na-achịkọta ọrụ nyere ọrụ, sitere na mabul, granite na soapstone.
A na-etinyekarị ihe ndị a nụchara anụcha na igbe ndị ahaziri iche, nke a na-ejikarị velvet, ma gosipụta dị ka ezigbo ihe eji achọ mma.
Dị ka kaadị egwu, nke ha dị iche iche, dominoes na-ebu akara njirimara n'otu akụkụ ma bụrụ ihe efu na nke ọzọ.
A na-ekewa ihu njirimara nke mpempe akwụkwọ ọ bụla, site na ahịrị ma ọ bụ n'elu, n'ime akụkụ abụọ, nke ọ bụla nwere akara ntụpọ, dị ka ndị e ji mee ihe na data ahụ, ma e wezụga obere akụkụ ole na ole fọdụrụ. na-acha ọcha.
Na European version of the game, e nwere asaa ọzọ iberibe karịa na Chinese, ngụkọta 28 iberibe.
Ebe nkume nwere ọnụ ọgụgụ kachasị elu na dominoes anyị dị 6-6🂓, mgbe ụfọdụ, a na-eji ihe ndị buru ibu karị ihe ruru 9-9 (iberibe 58) ma ruokwa 12-12 (iberibe 91).
Inuit nke North America na-egwu ụdị nke dominoes site na iji usoro nke nwere iberibe 148.
Na China, ebe ihe okike nke egwuregwu yiri ka ọ nweghị njedebe, Dominoes bụkwa ihe ndabere na ihe nlere maka egwuregwu yiri ya ma dị mgbagwoju anya: mahjong .
Kedu uru na ọghọm dị na domino?
Egwuregwu ọ bụla nwere uru na ọghọm ya, ọbụlagodi otu egwuregwu dị ka dominoes. Uru ya bara ụba nke egwuregwu ahụ na ọghọm dị na ya.
Malite na uru, otu n'ime ha bụ na ọ bụ egwuregwu maka ọgbọ niile, n'ihi na ọ dị mfe nghọta, zukọta ma jikwaa ngwa ngwa, mana yana ọtụtụ usoro iji mee ndị na-egwuri egwu ogologo oge.
N'ime afọ a buru ibu enwere ọtụtụ uru mmụọ, dị ka mkpali nke mmepe nke usoro mgbakọ na mwepụ maka nke ọdụdụ nwa, mgbagha echiche maka ndị okenye yana ncheta maka ndị agadi.
N'ikpeazụ, ọ bụ egwuregwu bara uru. N'iji ogologo ma ọ dịkarịa ala egwuregwu abụọ, ọ ga-ezuru ịmalite egwuregwu ahụ.
Ma ọbụlagodi egwuregwu nwere ọtụtụ uru nwere obere obere ihe na-akpasu iwe. Malite na eziokwu ahụ bụ na e nwere naanị egwuregwu anọ, ma ọ dịkarịa ala n'ọtụtụ egwuregwu. O siri ike ịnabata nnukwu ìgwè, dịka ọmụmaatụ.
Ọzọ drawback bụ "finesse" iji melite egwuregwu ahụ, dị ka ọtụtụ egwuregwu bọọlụ ma ọ bụ ọbụlagodi egwuregwu. A na-achịkọta iberibe ahụ na-enweghị ụdị ndozi ọ bụla. Ọ bụ mberede na mberede na tebụl na ọ bụ ya.
IberibeN'ezie, ha bụ ọghọm n'onwe ha, ma ọ dịkarịa ala mgbe ha furu efu, n'ihi na ha pere mpe, ma ọ bụ na ha akaghị nká, na-efunahụ ha ma ọ bụ ọbụna uru ha bara, n'echiche nke isi.
Ihe omuma ihe
Mfe nzukọ na njikwa
Ọnụọgụ ndị egwuregwu
Arịọnụ siri ike
Echefuola na / ma ọ bụ eyi akụkụ